Homepage - Premier Decorative Materials Trading Company Limited
Your one stop Interior Decoration Materials Specialist
View our products, learn more and contact us for your project needs
Founded in 2010, Premier Decorative Materials Trading Co., Ltd. isaleading supplier and distributor of top quality interior decoration materials such as Biowood, Lamitak, IdeaPaint, Daiken Ceiling, Armourcoat Polished Plaster, and Duroe Architectural Ironmongery for the residential houses and commercial projects in Myanmar.
With years of experience in interior decoration industry, we established the Premier Decorative Materials with customer satisfaction as the foundation. We want our customers to have solutions that are reliable, durable and cost effective in their projects.
Our Sales Engineers research fromawide range of construction materials and recommend for the individual needs of our customers based on their designs, needs and budget.
Our company is committed to the continuous development of good practices and the advancement of environmental friendly green materials in Myanmar by sharing the product knowledge with the owners, contractors, and the developers in Myanmar.
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Premier Decorative Materials Trading Co., Ltd. မှ အရည်အသွေးမြင့် အိမ်အတွင်းပိုင်း အလှဆင် ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြသော Biowood, Lamitak Laminate Sheet, IdeaPaint, Daiken Ceiling, Armourcoat Polished Plaster နှင့် Duroe Architectural Ironmongery တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ လူနေအိမ်များနှင့် စီးပွားရေး စီမံကိန်းများ အတွက် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချ တပ်ဆင် ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အိမ်နှင့် အဆောက်အအုံ အတွင်းပိုင်း အလှဆင် လုပ်ငန်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များ၏ ကျေနပ်မှုကို အခြေခံ အုတ်မြစ်အဖြစ် ထားရှိကာ တည်ထောင် ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များ အားလုံးအတွက် ယုံကြည် စိတ်ချရပြီး၊ ရေရှည် အသုံးခံသော ပစ္စည်းများနှင့် တစ်ဦးချင်း လိုအပ်ချက်အတိုင်း အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ကောင်းမွန်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အလေ့အကျင့်များ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိသော စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး ပစ္စည်းများ ဖွံဖြိုး တိုးတက်စေရန် အတွက်၊ ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အသိပညာများကို သုံးစွဲသူ အိမ်ပိုင်ရှင်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Armourcoat Columns @ Awei Metta Hotel
Biowood Decking @ Sakura Residence
IdeaPaint Wall @ Dulwich Int’l School
Mon to Sat 8 AM -4PM
09 45678 3338
09 45678 3339
09 42113 7142
No.66/B, Wai Za Yan Tar Road,
South Okkalapa Township,
Premier Decorative Materials Trading Co., Ltd. © 2021